Maxaa Loola Jeedaa Cunto Isku Dheelli-tiran?
(Hadhwanaagnews) Wednesday, November 07, 2018 07:09:03
Sidaa daraadeed raggu waxay u baahan yihiin tamar ka badan ta dumarka, dadka shaqooyinka culus qabtaana waxay
In badan waxa aad maqashaa arrinta la xidhiidha cunto dheelli-tiran. Waxa aan haddaba is waydiinaynaa maxaa looga jeedaa cunno isku-dheelli tiran?. Cunno isu-dheelli tiran waxaa looga jeedaa ama ay tahay cunnada uu jidhku ka heli karo nafaqadii ku caawin lahayd in shaqada sidii la rabo inuu u guto. Waa inuu jidhku ka helaa tamar ku filan taasoo ka timaadda khudaarta, furits-ka, midhaha iyo protein-ka.
Maxaa Looga jeedaa “Calories”?
Badanaa dhakhaatiirta ka hadasha cunnada isu-dheelli tiran iyo cilmiga nafaqadu waxay tilmaamaan mar kasta eraygaa “calories” oo lagu cabiro inta aad ka qaadan kartid cunto kasta nooca aad uga baahan tahay. Waxaa erayga “calories” laga wadaa
cabirka tamarta eebe ku abuuray cunto kasta, sidaas awgeed wuxuu jidhkaagu ka helaa tamartaas cunnada wuxuuna u adeegsadaa socodka, fakarka, neefsashada iyo waxyaabo kalaba. Waxaa lagu qiyaasaa in qof kasta uu u baahan yahay inuu helo 2,000 oo tamar maalin kasta si uu miisaankiisa ugu hayo meesha uu joogo.
Haddii cabirkaasi intaa ka yaraado miisaankaagu wuu yaraanayaa, hadduu intaa ka batana miisaankaagu wuu kordhayaa, taasi macnaheedu waxay tahay wixii intaa ka badan jidhku wuu keydinayaa oo miisaan ayaa ku fuulaya ama way yartahayoo jidhka ayuu ka soo amaahanayaa sidaas ayuuna miisaankaasu ku yaraanayaa. Qofka inta uu u baahan yahay maalintii waxaa la qiyaasaa da’da, jinsiga iyo shaqada uu qabto maalintii. Sidaa daraadeed raggu waxay u baahan yihiin tamar ka badan ta dumarka, dadka shaqooyinka culus qabtaana waxay u baahan yihiin tamar ka badan dadka aan shaqada culus qaban.
Waxaa jira wax la yidhaahdo “tamarta eberka ah” ama “empty calories” oo ah cunnooyinka aan wax nafaqo ah aanu jidhku ka helin laakiin caloosha buuxiya kaliya waana cunnooyinka u badan dufanka iyo sonkorta.
Cunnooyinkaas waxaa ka mid ah:
-Keegga ama Buskudada noocyadooda kala duwan
– Burcadka ama Labeenta Caanaha
-Cabitaanada lagu magacaabo kuwa Tamarta “energy drinks”
-Cabitaanada Soodhaha leh ee la soo warshadeeyay
Waa maxay faa’iidada cunnada isu-dheelli tiran?
Cunnada isu-dheelli tiran waxay ka qeyb qaadataa in jidhku u qabsado howshiisa sidii ugu habboonayd iyadoo aan wax culays ah la saarin xubnaha kale ee jidhka, waxayna ka hortagtaa nafaqo-darrida iyo cayilka, waxay kaloo yaraysaa halista cudurradan:
-Faalijka / Faaliga:
Cunno kasta oo jidhka gasha waxaa loo baddalaa wax faa’ido u leh qeybo kala duwan oo jidhka ka mid ah, sidaa awgeed waa inuu jidhku helaa cunno dabooli karta baahida kala duwan ee jidhka haddii ay ahaan lahayd isku dheeli tirka macaadiinta, dheecaanada iyo hormoonada jidhka iyo wixii murqaha, lafaha, xididada ama neerfaha u baahnaan lahayd, marka si baahida loo daboolo waa inuu qofku qaatay maalintaas wax laga heli karo wax kasta oo jidhku u baahan yahay, si taasi lagu gaadho waa in cunnadaadu isku dhafan tahay ama isku dheeli tiran tahay waana waxa aan kaga hadlayno qoraalkan ama qormadeenan caafimaad. Haddii aad hal cunno maalin kasta cuntid, cunnadaadu iskuma dheeli tirna oo waxaa kaa maqan qeybihii kale.
Sidee Loo Helaa Cunno-Isu Dheelli Tiran?
Qolo kasta waxay leedahay dabci ama caado u gooni ah oo ku saabsan xagga cunnada iyo nafaqada oo ay kala dhaxlaan, Soomaalida waxaa lagu tiriyaa dad ku liita xaga cunnada isu-dheelli tiran, maadaama miiska cunnada Soomaalida ay ka maqan tahay cunnooyinka ugu muhiimsan ee isu-dheelli tirka.
Cunnadaas Ayaa Waxaa Ah Khudaarta Ama Cagaarka Iyo Fruits-Ka.
Tusaale: badanaa qoysaska Soomaalida subaxii waxaa lagu quraacdaa canjeero/Laxoox ka samaysan daqiiq, waxaa badanaa lagu cunaa Suba ama saliid iyo sokor, dad dhif aha ayaa hilib ama beed ku cuna ama laxooxda ka samaysta midho nafaqo leh sida qamadiga, gallayda iyo xubuubta kalaba.
Duhurkii waxa ay sida qaalibka ah Soomaalidu cuntaa waa bariis ama baasto leh suugo, qoysas dhif ah ayaa ku darsada hilib. Habeenkii waxaa la cunaa Roodho iyana daqiiqa ka samaysan ama midho ay ka mid tahay digirtu ama wixii kaloo la heli karo ama wixii qadada ka soo hadhay.
Taasi waa jadwalka ugu badan ee qoysas badan wadaagaan dadka Soomaalida. Qaladaadka kale ee jira ayaa ah in dad badan ay aaminsan yihiin haddii aad rabaan cunno isu-dheelli tiran waa in aad kharash fiican haysatid, taasina sax ma aha. Qoysas badan oo inaga faqiirsan ayaa cunnadooda isu-dheelli tiran tahay oo ku nool wadamo inaga faqiirsan ama saboolsan. Dad kale ayaa aaminsan in aan khudaarta la sheego ama fruits-ka aan joogto looga heli karin suuqyada ama aynaan beeranba, taasina sax ma aha sababtuna waa in aanay qiimo cunno ama nafaqo noogu fadhiyin, waana sababt aan u beeran la’nahay.
Tusaale ahaan: Khudaarta ugu nafaqada badan waxaa lagu tilmaamaa koostada, waddankeena waa laga helaa laakiin dad dhif ah ayaa isticmaala, waxaa kaloo ka mid ah digirta qoyan ee cagaarka ah oo suugada lagu karsado oo gali karta booskii hilibka nafaqo ahaan, waxaa ka mid ah caleenta Kaabashka oo siyaabo kala duwan loo isticmaali karo oo faa’iido nafaqo leh oo wadankeena aad uga baxa, dadka badankiisuna aanay aqoon u lahayn. Cagaarka kaliya ay soomaalidu taqaano waa Saladhka mana aha geed xag faa’iido ama nafaqo gaadhi kara kuwa aan kor ku soo xusnay ee ay ka mid yihiin Koostada iyo Kaabashku, wayna ka qaalisan yihiin oo cid kasta joogto uma heli karto. Xagga Furuutiska haedaan jalleecno waxa kaliya ee aan ka midaysan nahay waa Muuska oo aan badanaa laga waayin miiska qadada, sidaas awgeed Soomaalida badanaa laguma sheego inay ka yar tahay macdanka bootaasiyamka / Potassium-ka ayaa ah macdan ka buuxda Muuska. Laakiin waxa ka soo hadhay waa dhif in la cuno amaba looma arko cunto ee waa faakihaysi.
Xagga protein-ka iyo cunnada jidhka dhista waa iyaduna mid aan fikrad qaldan ka haysanno, maxaa yeelay markii borotiin la sheego dadka waxay ka fekeraan markaaba Kaliya hilib iyo digaag iyo kalluun, laakiin waxyaabo badan oo booskooda gali kara ama soo dhawayn kara oo ka raqiisan ayaa jira laakiin Soomaalidu cunno uma taqaano. Kuwaasi waxaa ka mid ah: Lowska, Digirta, Yicibta, Sisinta, Caanaha iyo wixii laga sameeyay sida Burcadka iyo gadhoodhka.
Xaga dufanka iyo saliidaha leh qiimo nafaqeed oo iyadana nagu yar markii laga reebo macsarada.
Ogow nafaqada iyo tamarta laga helo cunnada kuma xidhna tiro badnideeda iyo waxa aad cunayso waynigeeda, waxaad kaloo ogaataa cunnada dabiiciga ah ama fresh-ka ah in mar kasta ay ka nafci badan tahay midda kale. Ku dadaal in aad cunto Gallayda, Hadhuudhka, Sisinta, Caanaha, Khudaarta cagaaran sida Salladhka, Kaabashka, Daba-casaha, Baamiyaha, Koostada iwm, Sidoo kale qaado Furuutiska. Ka fogow waxyaabaha daqiiqda ka samaysan iyo baastada iyo saliid caddayda. Ka fogow haddii aad leedahay balwad sida qaadka, sigaarka iyo tubaakada.